7 Suuqyada Ugu Fiican Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 7 Suuqyada Ugu Fiican Yurub
Tareenka u raadi meesha ugu habboon ee loogu talagalay magaalada burburay ama adeegashada, caasimadaha ugu yaabka badan Yurub ayaa wada leh. Suuqyada xaydha ayaa ah meesha dib udhaca iyo casriga, joogo iyo taariikh, isu imaada, meesha waxyaalo waaweyn ka muuqdaan, iyo kaayaga 7 suuqyada ugxanta ee ugu fiican Yurub ayaa ah tusaalaha ugu habboon.
Haddii aad jeceshahay wax iibsiga, iyo gaar ahaan waxyaalaha guridda, markaa kuwan 7 suuqyada ugxanta ee ugu fiican Yurub waxay noqon doontaa riyo rumowday. Si fudud u raac suuqyadeenna ugu dambeeya ee dhoofinta Yurub, oo qabso a shandad weyn!
1. Suuqa Dhirta ee Munich
Haddii aad u socoto Bavaria si aad u hesho Ciidaha Yurub guga, oo raadinaya qaar ka mid ah khasnadaha guridda cusub, markaa waxaad jeclaan doontaa suuqa weyn ee boodada ah ee Munich. Suuqan aadka u xiisaha badan ayaa calaamadeeya xafladaha guga waxaana la qabtaa sanadkiiba mar.
Waxaa jiri doona in ka badan 2000 waratada, leh guridda cajiibka ah waa, sida boorsada Louis Vuitton qiimo jaban. Sidaa darteed, waa inaad ubaahantahay inaad maalinta sabtida ah u cadeyso suuqa dhoofinta ee Riesen-Flohmarkt Theresienwiese ee magaalada Munich. Intaa waxaa dheer, la imow liiska wax iibsiga oo cad, oo aad halkaa joogtid inta aad awooddo. Albaabadu way ka furan yihiin 4 waxaan ahay, oo ma noqon doontid shimbirta kaliya ee hore!
2. Suuqa dhogorta Amsterdam
Haddii ay dhacdo inaadan ogeyn, Amsterdam waa magaalo leh taariikh ganacsi oo hodan ah. Sidaa darteed, layaab ma leh in mid ka mid ah suuqyada ugxanta wanaagsan ee Yurub ku yaal Amsterdam. Hal mar sanadkii, waddooyinka quruxda badan ee Amsterdam, isu rogi suuq furan, halkaas oo aad ka adeegan karto oo aad ku qoyn karto jawiga cajiibka ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Yurub.
Hal mar sanadkii, sida dabaaldegga maalinta Boqorka, kanaallada iyo luuqyada Amsterdam waxay isu beddelaan suuq aad u tiro badan. Gur guridda, tahay, qalabka, iyo khasnadaha kale ee gacanta labaad ayaa kugu sugi doona suuqan qurxinta leh.
Goorma? 6 ahay in 8 galabnimo 27-ka Abriil.
Suuqa ugxanta ugu weyn uguna caansan dalka Faransiiska, suuqa boodada Grande Braderie de Lille ayaa martigelin doona 10,000 waratada.
Suuqa Lille ee suuqa ayaa ah dhacdada ugu weyn ee sanadka waxaana la qabtaa dhammaadka usbuuca koowaad ee Sebtember. Haddii aad tahay guridda, iyo walxaha dib loo dhigo, markaa waxaad ka fiicnaan laheyd tigidh Lille bisha Sebtember 4th– 5th, for extravaganza guridda.
Waxaa la yidhi, in ay kugu dhawayn doonto 40 saacadood oo kaliya in lagu dhex maro tarabuunka oo dhan, waana taas iyadoo aan loo istaagin oo aan la adeegsan.
Dhowr weedho oo waxtar leh inaad hayso & baro:
“Waa maxay qiimaha kuugu fiican?”- Waa maxay qiimaha kuugu fiican?
"Coupons la poire en Deux" - Aynu bartamaha iskula kulanno / gorgortan galno
Sidee in ay halkaas ka heli? Qaado saacad TGV safarka tareenka ee Paris.
4. Suuqa Wadada Portobello ee Magaalada London
Suuqa ugufiican ugxanta England ayaa maalin walba ka dhaca suuqa Portobello ee London. Dharka, qadiimiga ah, cuntada, iyo khasnadaha gacanta labaad ayaa ku sugi doona maalin kasta oo ka mid ah usbuuca, laakiin u diyaar garoobo xoojinta tamarta iyo midabka Sabtida.
Sidaas, ka dib maalin dukaamaysi qaraami ah, waxaad soo qaadan kartaa khudaar macaan, cheese, iyo daaweyn kale oo qado deg deg ah kahor intaadan kusii wadin raadintaada guridda ee suuqa moodada ee Westway. Booqashada Suuqa Wadada Portobello waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee London lagu sameeyo, waana inaad maalin buuxda u hurtaa suuqan dhogorta leh iyo calaamadaha London.
5. Suuqa Caleemaha ee Paris
Markaan ka fikirno Paris, waxaan isla markiiba sawirnaa jawiga. Gaar ah, dahsoon, qadiim ah, Royal dhammaantood maskaxda ayey ku hayaan Paris, iyo suuqii dhogorta ee cajiibka ahaa.
Suuqa dhogorta ee Paris waa mid ka mid ah suuqyada ugufiican uguna wanaagsan Yurub marka loo eego khasnadaha dhifka ah ee ay qariso. Fanka Afrika, googoyin qurxin guridda, dharkuna waa uun wax ka mid ah waxyaabaha aad ka heli doontid suuqan weyn ee boodada ah.
Haddii aad rabto inaad soo qaadato qayb yar oo Paris ah, markaa suuqyada dhogorta ee Paris waa meesha laga adeegto. Waxaad bilaabeysaa raadintaada Wadada Rosiers, wadada weyn, oo hoos u soco si aad u gasho suuqyada kala duwan.
Sidee in ay halkaas ka heli? Qaad mitrooga, ku sii jeed Porte de Clignancourt on Line 4, oo raac dadka badan dhinaca buundada weyn ee shubka.
6. Suuqa Ciyaaraha Kubadda Cagta ee Brussels
Suuqa kaliya ee boodada ah ee furan 365 maalmood sanadkii, suuqa Ciyaaraha Kubadda ee Brussels, sidoo kale waa kan ugu weyn Belgium.
Oo ku taal bartamaha degmada Marolles, waxaad ka heli doontaa diiwaanada guridda, iyo buugaag dhif ah oo la dul dhigay bustayaal. Jidadka u dhow, waxaad ka heli doontaa dukaamo gacan labaad ah iyo kuwo qaraami ah.
Goorma? Waqtiga ugufiican ee lagu aado raadinta khasnadaha waa Khamiista iyo Jimcaha.
Halkee? Dhig du Jeu de Balle Brussels
Qiimaha Tareenka ee Antwerp ilaa Brussels
Qiimaha Tareenka Amsterdam ilaa Brussels
Paris si Qiimaha Tareenka ee Brussels
Milan waxaa ku yaal suuqyo dhogor dhoor ah, taasina maahan wax lala yaabo maadaama ay tahay caasimada moodada adduunka. Suuqa loo yaqaan 'Mercatone dell’Antiquariato' waa suuqa ugu weyn ee loo yaqaan 'flea market' ee magaalada Milano wuxuuna dhacayaa Axadda ugu dambeysa bil kasta.. Waxaa jiri doona 380 saldhigyada alaabta qadiimiga ah iyo dharka guridda, ku sugaya.
Si kastaba ha ahaatee, suuqa ugxanta hilaaca ee magaalada Milano waa Suuqa Bari. Haddii aad raadineyso qaybo la ururin karo ama farshaxan casri ah markaa waxaad ku jeclaan doontaa suuqa boodada Bariga. Ka sokow, waad ku qadan kartaa qado ama biir goobta DJ, intaad ku meeraysanayso meelihii qabow lagu istaagay. Marka aad soo dhex gasho, ma rabi doontid inaad waligaa ka tagto tan dib & xisbiga guridda.
Halkee? Via Mecenate, 84
Goorma? Axad walba
Sida loo tago Suuqa Bariga ee magaalada Milano? Qaado qadadka mitrooga 'M2'
Yurub waa isugeyn qurux badan oo casri ah, kuwaas oo u imanaya inay ku noolaadaan suuqyada dhogorta ugu yaabka badan. Safarka Yurub ma noqon doono mid dhameystiran adiga oo aan maalin ku qaadan mid ka mid ah kuwa ugu fiican 7 suuqyada dhogorta ee Yurub. Waxaa intaa dheer, ku noqoshada guriga ugu yaraan la'aan 1 goos goos goos ah waa sida aanad weligaa booqan Yurub oo dhan.
halkan at Save A tareenka, waan ku farxi doonaa inaan kaa caawinno qorsheynta safarkaaga kuwan 7 suuqyada dhogorta ugu fiican Yurub tareen.
Ma dooneysaa inaad ku dhajiso bartayada blog-ka "7 Suuqyada ugu Fiican ee Kalluunka ee Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-flea-markets-europe%2F%3Flang%3Dso - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
bestmarketseurope Biggestfleamarketeurope Europefleamarkets Europeshopping fleamarket shopping tareen safarka